မှန်ကန်သော ရှေးခယျြခွငျး ၏ အခင်အရှင် လျှပ်စစ် စက်ကိရိယာ သင့် အခပေး အာရုံစူးစိုက်မှု သို့ အဆိုပါ ပြဿနာ - Zhejiang Aoxiang auto-ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အဆိုပါအဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာအဆို့ရှင် operating နှင့်အဆို့ရှင်ချိတ်ဆက်များအတွက် devices များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ device ကိုလျှပ်စစ်ပါဝါစွမ်းအားဖြင့်နေသည်နှင့်၎င်း၏ရွေ့လျားမှုဟာလေဖြတ်ခြင်း, torque သို့မဟုတ် axial တွန်းကန်အားရဲ့ပြင်းအားကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကြောင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏အသုံးချနိုင်ဖို့ကအဆို့ရှင်အမျိုးအစားပေါ်စက်ကိရိယာနှင့်ပိုက်လိုင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အဆို့ရှင်များ၏ရပ်တည်ချက်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်သတ်မှတ်ချက်များမူတည်ပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဆုပ်ကိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်; (အလုပ်လုပ်ကိုင် torque ထိန်းချုပ်မှု torque ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်) Overload ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစဉ်းစားအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
1. Operating torque: Operating torque ယင်းအဆို့ရှင်ရဲ့လျှပ်စစ်စက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းများအတွက်အရေးအပါဆုံး parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏ output ကိုလိမ်အားအဆိုပါအဆို့ရှင်စစ်ဆင်ရေး၏ 1.2 မှ 1.5 ကြိမ်အများဆုံး torque ဖြစ်သင့်သည်။
2. စစ်ဆင်ရေးထိုး: အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏အဓိကဖွဲ့စည်းမှုနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တတွန်းကန်အားပန်းကန်စီစဉ်ပေးမပေးကြောင်းဖြစ်ပါသည်, နှင့် torque ကိုတိုက်ရိုက် output ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတွန်းကန်အားပန်းကန်နှင့်အတူအတွက် configuration ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်က output torque ဟာတွန်းကန်အားပန်းကန်ထဲမှာပင်စည်ခွံမာသီးမှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ output ကိုတွန်းကန်အားကူးပြောင်း။
က output ရိုးလည့်3နံပါတ်: အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏ output ကိုရိုးတံလည့်များ၏အရေအတွက်အဆို့ရှင်များ၏အမည်ခံအချင်း, ထိုအဆို့ရှင်ကို stem ၏အစေးများနှင့်ချည်ရဲ့အရေအတွက်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ (: M ကလျှပ်စစ် device ကိုကျေနပ်မှုဖြစ်သင့်သည်အဘယ်မှာရှိ) တော်လှန်ရေး၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို; ဒါဟာ M က = H ကို / ZS သည်နှင့်အညီတွက်ချက် H ကိုပုဆို့ရှင်, မီလီမီတာ၏အဖွင့်အမြင့်ကား, S ကပင်စည် drive ကိုချည်, မီလီမီတာ၏အစေးရှိ၏ Z ကိုကို stem ဟာ Thread များ၏အရေအတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ )
4. ပင်မအချင်း: လျှပ်စစ်ကိရိယာကခွင့်ပြုခဲ့အများဆုံးပင်စည်အချင်းဟာအဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်ကို stem ဖြတ်သန်းလို့မရဘူးဆိုပါက Multi-အလှည့် type ကို Open-အဆုံးအဆို့ရှင်သည်, ဒါကြောင့်လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်သို့စုဝေးစေမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏ဆွန်းရိုးတံ၏အတွင်းပိုင်းအချင်းဖွင့်လှံတံကိုအဆို့ရှင်များ၏ပင်စည်၏အပြင်ဘက်အချင်းထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း rotary အဆို့ရှင်နှင့် Multi-အလှည့်အဆို့ရှင်အတွက်မှောင်မိုက်လှံတံကိုအဆို့ရှင်အဘို့, ပင်စည်၏အချင်း၏ပြဿနာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါပေမယ့်, ပင်စည်နှင့်အ keyway ၏အရွယ်အစား၏အချင်းအပြည့်အဝဒါရွေးချယ်ရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် ပရိသပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော။
5. Output မြန်နှုန်း: အဆို့ရှင်၏အဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲမြန်နှုန်းရေတူထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်အရာ, အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်လျော်သည့်အဖွင့်နှင့်အပိတ်ပွဲမြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအရသိရသည်ရှေးခယျြထားရပါမည်။
6. တပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း: လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ခြင်း, အလျားလိုက် installation နဲ့ကြမ်းပြင်တပ်ဆင်ခဖြစ်၏ ဆက်သွယ်မှု mode ကိုဖြစ်ပါသည်: တွန်းကန်အားပန်းကန်; ယင်းအဆို့ရှင်ကို stem 'passes (တောက်ပ Multi-အလှည့်အဆို့ရှင်); မှောင်မိုက်လှံတံကိုပိုပြီးလှည့်, အဘယ်သူမျှမတွန်းကန်အားပန်းကန်; ယင်းအဆို့ရှင်ကို stem မှတဆင့်မ; အဆိုပါ rotary လျှပ်စစ် device ကိုအသုံးပြုမှုများကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်, နှင့်အဆို့ရှင်အစီအစဉ်ကိုထိန်းချုပ်မှု, အော်တိုထိန်းချုပ်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုသဘောပေါက်များအတွက်မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, အဓိကအားဖြင့်ပိတ်ထားသော-circuit ကိုဆို့ရှင်အပေါ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုလစ်လျူရှုမရနိုင် - torque သို့မဟုတ် axial အင်အားကန့်သတ်ဖြစ်ရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ် device ကိုနားချင်းဆက်မှီကန့်သတ်မယ့်လိမ်အားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။